Chineke Fortune | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
Si plethora nke bonus na atụmatụ, Divine Fortune Ohere mepere Free daashi na atụmatụ na-otu nke kasị mma mgbe nyere site ọ bụla online cha cha. Ndị mmadụ bụ onye mere ka nke a kwe omume bụ na mmepe na Net Entertainment. O yiri ka ha kere a oghere site bukwa ụzọ sụọ na nke kacha mma mgbe oghere nhọrọ ọ bụla online cha cha egwuregwu. E nwere ndị ọzọ Greek-themed ohere mpere site iche iche na mmepe ma Divine Fortune ga bụchaghị kọwaa a dị iche iche Ịgba Cha Cha ahụmahụ gị.
Banyere Mmepụta nke Divine Fortune ohere mpere
Atụmatụ na bonus nhọrọ dị ka Divine Fortune Ohere mepere Free daashi nwere ike na-abịa site a Mmepụta enwe ihe hà ma ọ bụ mma olu dị ka NetEnt mmepe. Alaka nke a ụlọ ọrụ na-agbasa n'ụwa nile. Ọ bụ nke a azụmahịa nke na-emepe emepe software maka cha cha egwuregwu ebe ọ bụ na 1996 na ọ n'ezie masịrị Player na ọtụtụ amamiihe egwuregwu karịrị oge.
Chineke Fortune bụ a ọkọlọtọ 5 ukwu oghere na 20 paylines. Divine Fortune Ohere mepere Free Daashi atụmatụ ime ka nke a oghere a ezigbo egwuregwu. Ị ga n'anya ịhụ ndị ịnyịnya ọcha ima elu ke ọṅụ na ịgbasa ọhịa feature. Nke a na-eme mgbe wilds ghọọ machie wilds ruru ka ohere mpere Falling Wild Feature. Na Falling ọhịa feature, ọ bụla player e nyere a free re-atụ ogho mgbe ọ bụla ọhịa na igosi na-esi anwụde dara a ebe ala. Mgbe akara n'aka ala ọzọ a ọhịa akara, na machie wilds ma ọ bụ na Wild on Wild feature na-arụ ọrụ. Ọzọkwa na-ị na-arụ na-esi anwụde, ị ga-esi a free spins ịkpalite. Mgbe ole 3, 4, ma ọ bụ 5 chụsasịa ọ bụkwanụ na na-esi anwụde, ọ na-enye gị 4, 8, and 12 free spins n'otu ntabi.
The Pegasus ma ọ bụ ịnyịnya ọcha bụ anụ. Medusa, Nemea Lion, Minotaur, na Phoenix bụ ndị ọzọ na akara tinyere mgbe nile ebre kaadị na akara si A-J.
3 gold mkpụrụ ego ga-ịkpalite egwuregwu jackpot gị, -ewere gị ka a dị iche iche na ihuenyo ọzọ na 5 reels. I nwere ike irite nnukwu na jackpot atụmatụ. Ọ nwere ike na gị mụbaa eto ruo 200 ugboro.
The ịkụ nzọ nso amalite site 20p a atụ ogho ruo a kacha nke £ 100 kwa atụ ogho kwupụta a payline.
Player na-ntabi-emeso na-ekiri egwuregwu nke Divine Fortune Ohere mepere Free Daashi n'ime play. The technology na eserese-eji NetEnt bụ n'ezie ihe kwesịrị ịja mma. The ndabere na soundtrack na-niile nakwa synced na isiokwu na-eke na-akpali akpali AURA maka egwuregwu ọkpụkpọ.